Ndingayithucula njani i-SEO yam ngokulungisa i-backlinks ephukile eqondayo?
Ewe, kunokwenzeka ukuba unike amandla okwenza ngcono umzamo wakho jikelele kwi-SEO - nje ngokulungisa izixhumanisi zakho ezikhoyo kunye nokufaka isicelo sokubuyisela emuva i-backlinks. Njani? Ewe, makhe sibone.
Izizathu ezintathu eziphambili zokubuyisela izixhobo eziphazamisekileyo:
1. Unokuthatha ngokupheleleyo ukulawula inkqubo yokuphunyezwa kwayo (ngokungafani nesabelo seengonyama somnye umsebenzi, umzekelo njengokukhuthazwa komxholo);
2. Ukulungiswa kwezikhonkco eziphukileyo, awukwazi nje ukukhulisa izikhundla zakho zokukhangela kodwa ufumane ininzi yezibonelelo ezifihliweyo (e. g. , amava angcono kumsebenzisi);
3. Uya kwenza inzame yomzamo oye usujongene nayo.
Ukuqwalasela ukuba yonke inkqubo ethathwe kwinqanaba ingaba yinto ephikisanayo neyinkimbinkimbi yokulawulwa kakuhle, nantsi isethi esifutshane sezenzo zokuphatha ngendlela efanelekileyo:
Chonga zonke iinqununu eziphukileyo ozifumana kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi.
Ukwahlula ngamaphetheni amakhulu.
Sebenzisa isakhiwo sekhonkco kwi-intanethi kunye nesixhobo sokuncedisa ukubhala imiyalelo.
Gqibezela imisebenzi yakho ngokuhambisa i-backlink kwaye uhlolisise ngokubanzi.
Ukuchonga izixhumanisi ezihlukileyo
Masiphinde sibhengeze kwakhona - siza kujonga ukuhambisa i-backlinks ekhokelela indlela eya kumaphepha aphukileyo kwiwebhusayithi yakho. okanye iblogi. Ngaloo ndlela, kuya kufuneka ukuba ufumane isishwankathelo esithile kubo-usebenzisa i-Google Search Console, okanye nayiphi na isistim ekhethekileyo senethiwekhi ye-intanethi ye-data ecacileyo necacileyo, njenge-Open Site Explorer (Moz), Semalt Analyzer (Semalt), okanye Ukumemeza iFrog I-spider SEO. Emva kwakho konke, kukuphela kwakho ukugqiba isisombululo sokukhetha loo msebenzi.
Ukwenza njalo, khumbula - kuya kufuneka ulungise zonke iikhonkco zangaphakathi eziphukileyo ezikhoyo kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi, njengoko kunokuba kukho ezininzi ii-URL eziye zafudlulela kwiminyaka yamuva. Ngoko ke, konke okufunekayo ukulungelelanisa umsebenzi obuninzi kunye nobunzima obunokuchitha ixesha - usebenzisa i-Google Search Console ukuze uqondise kwakhona i-backlink ngesandla. htaccess okanye iplagi ekhethekileyo ukuba usebenzisa i-WordPress. Okanye usenokukhawuleza uhanjise ezininzi iingqungquthela ezidinga ukulungiswa - usebenzise nje omnye wabancedisi abaxeliweyo kwi-intanethi.
Ukwahlula ii-URL ngokuHlaziya iipateni
Njengomsebenzisi kwi-WordPress, kulindelwe ukuba ndichonge amaphetheni amandulo e-URL (umzekelo, ukuza njengegama lesigama + ngenyanga +. html), kunye neendlela ezintsha ze-URL (e. g. , idilesi + igama lokuposa). Ukufaka kwiNgesi ecacileyo, uya kufuneka ubhale imfundiso ekhethekileyo yebhobho ye-Google yokukhwela ukuwaxelela malunga nalezi okanye ezinye iinguqu zogxininiso-zombini kwi-URL ngokwalo, kunye nekhowudi yekhasi le-HTML (ngaphandle koko, sebenze u-301 ukulungisa).
Ukubhala Ukubuyisela kwakhona
Ngokwam, ndasebenzisa izixhobo ze-Permalink Helper ukusebenza ngekhodi URLs. Yonke into ifanele ibe yinto ecacileyo apho, kodwa khumbula ukuba neprojekthi ye-URL ye-URL njengoko i-URL eqala nge-domain yakho, ilandelwe ngamanani kunye ne-slash, ekugqitywa ngexesha eliguquguqukayo ukusuka kwi-WordPress, kwaye uqaphele kwi-HTML ephunywe ngexesha. Khumbula ukuba uguquko kufuneka luhlale luqaliswa kwaye luphele ngokuxhamla.
Gcwalisa kwakhona i-Backlinks kwaye Hlola
Ukugqiba inkqubo, vele ungene. ifayile ye-htaccess kunye nekhowudi ngokusebenzisa uxhumano lwe-FTP kunye nomncedisi wakho. Qaphela - qiniseka ukuba yonke into ikhona. Ndiyathetha ukuba ulawulo lokufikelela kwiwebhusayithi yakho okanye iblogi. I-Htaccess, ukuba kukho into engafanelekiyo, unokusaphaza yonke into-nangona ikhowudi ephosakeleyo. Ngaloo ndlela, konke okufunayo kukukwahlula ukulungiswa kwakho kwiNkcazo kunye noThagethi, sebenzisa inkqubo yokukhangela ngethuluzi lokukhangela - kwaye uyenziwe!
Isicatshulwa: inqubo efanayo iya kufakwa kwiikhonkco zangaphakathi eziphukileyo. Ewe, ngokuqinisekileyo akufanele baphumelele naluphi na ukulungiswa, kodwa ngelanga, ayisoloko inokwenzeka. Khumbula - ukuhamba ngokubhekiselele kungcono kunama-404 Source .